Nobaikon’ny manampahefana ogandey haaton’ny sehatra media miisa 13 amin’ny asany ireo ekipa mpitati-baovaon’ny olomalazan’ny fanoherana · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ny manampahefana fa nomen'ny fampitam-baovao "vahana be loatra" ny MP Bobi Wine
Voadika ny 10 Mey 2019 5:18 GMT
Ilay mpihira malaza Bobi Wine mikabary ao amin'ny hetsi-panoherana ny hetran'ny media sosialy tamin'ny 11 jolay 2011 2018. Sary nozaraina imbetsaka ao amin'ny Twitter.
Nobaikon'ny Ugandan Communications Commission na ny Vaomieran'ny Fifandraisana Ogandey (UCC) haaton'ny trano fampitam-baovao miisa 13 amin'ny asany ireo mpiasa miisa 39 ka ao anatin'izany ny mpanatontosa, ny lehiben'ny vaovao ary ny lehiben'ny fandaharana.
Ireo seha-baovao tratran'ity baiko ity dia ahitana tobim-pahitalavitra miisa enina sy tobim-pampielezampeo miisa fito.
Tonga izao baiko izao taorian'ny fisamborana parlemantera iray sady olo-malazan'ny hira pop Robert Kyagulanyi, fantatra amin'ny anarana hoe Bobi Wine, tamin'ny 29 Aprily. Niforona ny fanoheram-bahoaka taorian'ny fisamborana ilay mpikambana parlemantera raha nizotra any an-dalana ho any amin'ny komisariàn'ny polisy izy handrakitra ny filazana izay nolazainy nandritra valandresaka ho an'ny mpanao gazety taorian'ny nanafoanan'ny manampahefana ny kaonseritra saika hataony.
Taorian'izay tamin'io andro io, notazonina tao amin'ny fonjan'i Luzira i Wine taorian'ny nisehoany teo amin'ny fitsarana. Nampangaina izy ho “nanao famoriam-bahoaka” — anondroana ireo fihetsiketseham-panoherana ny hetran'ny media sosialy — tsy nahazo fankatoavana tamin'ny inspektera jeneralin'ny polisy araka ny notondroin'ny lalànan'ny mpitantana ny filaminam-bahoaka (POMA). Noafahana vonjimaika rehefa nandoa antoka i Wine taorian'izay.
Vakio bebe kokoa: Nanoratra hira momba ny herisetran'ny polisy ilay mpanao politika sady mpanakanto Ongadey nandritra ny fanagadrana azy tamin'ny trano ambenana [mg]
Nandeha mivantana an-tserasera tamin'ny tobim-pahitalavitra vitsivitsy ny fizotran'ny fitsarana tamin'ny 29 Avrily raha nibahantoerana tamin'ny seha-baovao hafa ny vaovao mafana momba an'i Wine sy ny fihetsiketseham-panoherana manodidina ny fisamborana azy.
Nolazain'ny UCC fa nanaitaitra fatratra ny tatitra nataon'ireo seha-baovao ireo ary mampanjakazaka tafahoatra an'i Wine, izay mpitsikera ny governemanta mitondra amin'izao fotoana. Toy izao ny fivakin'ny baikon'ny UCC:
Natao izao taorian'ny zava-mampanahy tamin'ny karazam-botoaty nalefa tamin'ireo toby fampielezam-baovao ireo indrindra nandritra ny fandaharana mandeha mivantana, vaovao mafana, ary ireo vaovao lehibe izay tsy mifanaraka amin'ny lasitry ny fampielezana bitika indrindra.
Tsikaritry ny vaomiera fa ireoprograma ireo dia ahitana votoaty izay:
1. Tsy mampiseho araka ny tokony ho izy ny vaovao, ny fijery, ny zavamisy sy ny toe-javatra ao anatin'ny fomba mandiso lalana sy mahatonga ny olona ho taitaitra.
2. Ahitana hafatra mahery fihetsika na tsy manaja fahefana, tafiditra amin'izany ny fandrisihana herisetra ao anatin'ny tanjona politika na zavatra hafa.
3. Mandrisika olona hiady amin'ny vondron'olona hafa araka ny fikambanana politika, fivavahana, kolontsaina ary foko izay mety hiteraka tsy filaminana na herisetram-bahoaka.
Manaraka, ireo lazaina ho programa dia natolotra amin'ny fomba tsy misy fandanjalanjana, manaitaitra ary matetika manome vahana tafahoatra olona na vondron'olona manokana, izay manitsakitsaka ny lasitry ny fampielezana kely indrindra izay asandratry ny fizarana faha-31, andininy faha-4 amin'ny lalànan'ny fifandraisana Ogandà taona 2013.
Efa imbetsaka ny UCC sy ny hery mitam-piadiana teo aloha no nanafika sy nanakatona vonjimaika sehatra fampitam-baovao noho ny antony mifandraika amin'ny fanitsakitsahana ny fenitry ny fampielezana kely indrindra. Maro ireo mpanao gazety, fikambanana sy rafitra manerana ny firenena no nanameloka ny baiko izay nivoaka andro vitsy monja mialoha ny andro manerantany ny fahalalahan-gazety.
Vakio bebe kokoa: Uganda's social media tax is leaving people disconnected — and failing to meet revenue targets
Namoaka fanambarana ireo mpanao gazety mitatitra avy amin'ny parlemanta ogandey izay mialoka ao amin'ny Fikambanan'ny Gazety Parlemantera Ogandey izay manasongadina ny anjara asan'ny fampitam-baovao ao amin'ny fiarahamonina izay takonana ny fahalalahana hanao fihetsiketsehana. Nanamarika avy eo ny filohany fa ny fandefasana mivantana sy ny vaovao mafana dia fomba iray hahatonga ny olona hahara-baovao, fa tsy handrisika herisetra na hanao hetsika hafa tsy araka ny lalàna:
Iantohan'ny lalampanorenantsika sy ireo lalampanorenana hafa avy any amin'ny firenenkafa sivilize ihany koa ny fahalalahana hanao fihetsiketsehana. Ary dia mandre ianao ahiahy momba ity toe-javatra ity amin'izao fotoana izao amin'ny fampiasan'ny polisy tsy araka ny tokony ho izy ny lalànan'ny fitantanana ny filaminam-bahoaka mba hanakonana ny fahalalahan'ny mpiantsehatra hafa indrindra fa ny mpanohitra
Niantso ho amin'ny firaisankinan'ny mpanao gazety sy ireo mampiasa ny sehatra fampitam-baovao hafa ny filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety Ogandà, Kazibwe Bashir, mandrisika azy ireo hijoro ao anatin'ny fivondronana sy hiteny mafy amin'ireo tsy rariny.
Fotoana izao ho an'ny mpanao gazety sy ireo rehetra mpampita vaovao hahasahy hiteny bebe sy mafimafy kokoa ao anatin'ny firaisankina ho toy ny vatana iray, fa raha tsy izany dia ho masaka ka ho lany antsingatsingany ny hoavintsika. Natao hampahatsiahy antsika fotsiny izao toe-javatra manahirana izao fa: matanjaka kokoa noho ny basy ny penina.
Mametraka ny African Center for Media Excellence fa tsy tian'ny UCC ny fampitam-baovao hitatitra ny fihoaram-pahefana ataon'ny tafika mitam-piadiana:
… Mangataka fitokisana ny baikon'ny UCC ary mitondra ho any amin'ny fanontaniana manetsika ny manampahefana. Tsikaritra fa tsy ho zakan'ny UCC ny fitateram-baovao mampiseho ny governemanta, indrindra fa ny sampandraharahan'ny fiarovana, tsy ho amin'ny fandokafana mihitsy. Tsy ho zakany raha alefan'ny mpanao gazety mivantana ny fisamborana an-kerisetra olo-malaza iray ananganany ny tantara.
Nandritra ny fivoriana parlemantera, mpikambana maro ao amin'ny fanoherana no mangataka ny parlemanta hiditra an-tsehatra amin'ity raharaha ity ary hanakana ny baiko raha milaza amin'ireo tràn'ny baiko koa ny mpikambana ao amin'ny antoko mitondra mba hitady fiarovana ara-pitsarana araka ny lalàna:
Ao amin'ny Twitter, anontanian'ny mpanao gazetin'ny NTV Uganda rtoa Sheila Nduhukire ny tale mpanatanteraky ny UCC atoa Godfrey Mutabazi raha tena ao anatin'ny asan'ny vaomiera tokoa ny mibaiko ny tranom-baovao hampiato amin'ny asany ireo mpiasa izay manatanteraka fotsiny ny asany:
— Sheila Nduhukire 🇺🇬 (@Snduhukire) May 2, 2019
Arahaba @UCC_ED, taiza ianareo no nibolisatra tamin'ny iraka ampanaovina anareo ka hibaiko ny tranom-baovao hampiato ny mpanao gazety manao ny asany?
Mihevitra i Winnie Byanyima, tale mpanatanteraky ny Oxfam sady vadin'ny mpitarika ogandey ao amin'ny fanoherana izay in'efatra nirotsaka ho kandidà filoha Kizza Besigye, fa niditra amin'ny tokonam-baravaran'ny tsy fanajana intsony ny zon'olombelona i Ogandà:
Raharaha Bobi Wine: Aaton'ny UCC ireo mpitantana ambony amin'ny vaovao TV sy radio – natsipy avokoa izay endrika fahalalahan'ny fampitam-baovao sy ny fanajana ny zon'olombelona ary izay fitoviana eo anatrehan'ny lalàna. Efa jadona mitanjaka!
Mangataka amin'ny vaomiera ny mpisera Twitter Mugerwa Michael mba hitondra ireo nanitsakitsaka ny fenitry ny fampielezana kely indrindra ho eny amin'ny fitsarana ho valin'ny sioka navoakan'ny UCC ho an'ny gazety:
Rehefa hitanareo hoe nanitsakitsaka ny fenitra kely indrindra ry zareo dia ento eny amin'ny fitsarana fa hiady izahay hahatonga an'i Ogandà any amin'izay tianay. Aza reraka ary any amin'ny farany ianareo hiala tsiny fa dia tsy hamela anareo izahay.
Hihaona amin'ny National Association of Broadcasters (NAB) [Fikambanam-pirenena amin'ny Fampielezam-baovao] ny UCC amin'ny 7 mey [efa lasa] hifampiresaka momba ity baiko ity.